शे फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्‍ज भित्र झण्डै दुइ दर्जन अवैध भरुवा बन्दुक फेला ! SULSULE:A Truly Nepali News Portal
शे फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्‍ज भित्र झण्डै दुइ दर्जन अवैध भरुवा बन्दुक फेला !
शे फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्‍ज भित्र झण्डै २ दर्जन अवैध हतियार फेला परेका छन् । डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका र शे फोक्सुण्डो गाउँपालिकामा फैलिएको निकुञ्‍ज क्षेत्रभित्रै लुकाइ राखिएको अवस्थामा अवैध हतियार फेला परेका हुन् ।भेटिएकामध्ये केही बन्दुकमा गोली भरिएको थियो ।
निकुञ्‍ज ले तिनलाई खाली गराएको छ । भेटिएका बन्दुक र घोरलका छाला निकुञ्‍ज को कार्यालय, सुलिगार्डमा राखिएको छ ।स्रोतका अनुसार भीर, पहरा, गुफा र खोल्साखाल्सीमा लुकाइएको अवस्थामा बन्दुक फेला पारिएको थियो ।